यो सानो लेखमा हामी केही राज्य र छलफल हुनेछ मास्को मा प्राविधिक विश्वविद्यालय। दर्जा प्रस्तुत गरेर हामीलाई छ आधार मा केही मापदण्ड, जो गरिनेछ उल्लेख तल।
हामी शिक्षा प्रणाली कुरा भने, यो ठीक पश्चिम को प्रभाव बोलिहाल्यौं गर्नुभएको छैन र आफ्नो पहिचान संरक्षित छन् पाठ्यक्रम छ, अघि नै उच्च ज्ञान को आपूर्ति को स्तर मा बाँकी छन्। यस्तो मूल्यांकन मा चयन मापदण्ड दर्जा तीन उच्च शिक्षा संस्थाहरु संलग्न थियो स्थापना गर्न।
(बजेट स्थानहरूको संख्या पनि यो वस्तु समावेश छ) शिक्षा को लागत - यो संकाय वा बरु, घाटा को अभाव, र तेस्रो - पहिलो स्थानमा नयाँ नयाँ कर्मचारी को हाकिमहरूले, दोस्रो समीक्षा थिए। एक वैश्विक मूल्यांकन पछि निर्धक्क पहिलो स्थानमा यसको स्थिति मास्को राज्य विश्वविद्यालय राख्छ कि घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। एम वी Lomonosova।
शीर्ष दस लगभग सधैं नै रहन्छ छ। र मात्र होइन रूस मा तर पनि सीआईएस, साथै युरोप मा भर। विश्वविद्यालय को विशेषज्ञ स्नातक साँघुरो-प्रोफाइल युरोपेली विशेषज्ञहरु गर्न यसको विपरीत, जटिल समस्या सुलझाने को लागि एक सार्वभौमिक संयन्त्र बन्नेछ।
सबै उच्च शिक्षा संस्थाहरु जो देश को सबै ऊर्जा प्राप्त छ, मुख्यतः ठूलो शहर मा अवस्थित छ। मास्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग, टम्स्क - यो मात्र धेरै वर्ष को लागि आफ्नो पहिलो बाट सफाया छैन भनेर शहर को पहिलो तीन छ। एक तल रूस मा सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय देखाउँछ।
गत वर्ष भन्दा माथि5विश्वविद्यालयहरु:
मास्को राज्य विश्वविद्यालय। एम वी Lomonosova।
भौतिक र प्रविधि को मास्को संस्थान (राज्य विश्वविद्यालय)।
राष्ट्रिय अनुसन्धान आणविक विश्वविद्यालय "MEPhI"।
मास्को राज्य प्राविधिक विश्वविद्यालय। एन ई Baumana।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विश्वविद्यालय "अर्थशास्त्र को उच्च विद्यालय।"
यो सूची सबै विद्यालय मास्को मा अवस्थित छ। साथै, अर्थशास्त्र को उच्च विद्यालय पनि सीआईएस को शीर्ष दस विश्वविद्यालयहरु प्रविष्ट गर्नुभयो।
मन र युवा ठूलो शहर भागेर
शीर्ष मास्को मा विश्वविद्यालय, मूल्याङ्कन कुनै पनि अन्य उच्च विद्यालय भन्दा उच्च छ जो, बाहिर शिक्षकहरू सहित सबै युवाहरूलाई, राजधानी वा अन्य महानगरबारे गर्न चल्छ भन्ने कुरा। प्रान्तीय उच्च शिक्षा यसको स्थिति गुमेको छ। तर यो यसको लाभ छ: पहिले, त्यहाँ जीवन मा कुनै अवधि आफ्नो विद्यार्थी वर्ष भन्दा sweeter छ दोश्रो, तिनीहरूले जीवंत शहर मा ठाउँ लिन मात्र होइन देश तर पनि संसारभरिका भने, यो एउटा ठूलो प्रेरक हुनेछ छ, र।
अक्सर यो सानो सहर बाट मान्छे थप उत्प्रेरणा जो शहर को कुनै पनि निवासी भन्दा एकदम उच्च छ हो।
हालको अवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय मा मास्को (स्तर गर्दैन कुरा) प्रयासहरू गर्न प्रदान अधिकतम सम्भव नम्बर को Olympiad ठाउँहरू, जस्तै छुट लागि विद्यार्थीहरूले मा सम्झौता, जो गर्न सक्छन् कहिलेकाहीं पहुंच 70% को लागत को प्रशिक्षण एक वर्ष।
विद्यार्थीहरूको लागि अर्को मौका - पहिलो दुई semesters मा एक उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि बजेट मा भर्ना। स्थानहरूको संख्या Olympiad सीधा विश्वविद्यालय स्तर, साथै बजेट स्थानहरूको संरक्षण को प्रतिशत असर गर्छ। यो मूल्यहरु संग तुलना मा मूल्यहरु को गठन गत अवधिमा वृद्धि छैन भनेर याद महत्त्वपूर्ण पनि छ।
कारण तीव्र आईटी र नैनो, वातावरण, मार्केटिङ, र रसद को क्षेत्र मा वैज्ञानिक तथ्याङ्कले को दयनीय आवश्यकता मा, विज्ञान, ग्लोबल श्रम बजार, साथै रूस विकास गर्न। त्यसैले, हरेक जवान एक Crossroads उभिरहेको, पेशा को विकल्प सधैं एक र सबै जीवनको लागि छैन कि सजग हुनुपर्छ र यसलाई कौशल को विकास को लागि लगानीको अंश मा व्यक्तिगत प्रयासको धेरै लिन्छ।
यदि लोकप्रिय थिए मानविकी पेशों, यस्तो वकील रूपमा, अर्थशास्त्रियों, फिल्म उद्योग र थिएटर को कार्यकर्ता, यो प्राविधिक संरक्षित को कमी, यस्तो खोजे-पछि क्षणमा सिर्जना गरियो। बलियो मांग यस्तो शिक्षा उच्च गुणस्तरीय प्रबन्धकहरू र मध्य प्रबन्धकहरू ल्याउँछ भन्ने तथ्यलाई थप जोडिएको छ। हरेक विश्वविद्यालय , मूल्याङ्कन मास्को मा जो यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ यो पेशामा लागि मांग को कारक खातामा लाग्छ।
मास्को मा गैर-राज्य विश्वविद्यालय
गैर-राज्य उच्च शैक्षिक संस्थाहरू को रूस छ मुख्य रूप मूल्याङ्कन गरेर नै मापदण्ड सार्वजनिक। तर एक अलग वस्तु दर्जा प्रभावित भ्रष्टाचार को कमी छ।
निस्सन्देह, यो कारक धेरै आत्मपुरक छ, तर जब एक कलेज छनौट यो अक्सर महत्त्वपूर्ण छ रूपमा, खातामा लिन। छैन भन्दा अक्सर बस गैर-आर्थिक संस्थाहरू छन्। यहाँ तीन शीर्ष विश्वविद्यालय हो:
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र व्यवस्थाको संस्थान।
नयाँ आर्थिक स्कूल।
मास्को अन्तर्राष्ट्रिय उच्च "MIRBIS" व्यापार स्कूल (संस्थान)।
तिनीहरूले 4,2-4,24 मूल्याङ्कन गर्नुभयो। मास्को को गैर-राज्य विश्वविद्यालय, जसको दर्जा4छ, सूची र तल मा छैटौं स्थिति ओगटेको छ। र यसलाई गर्नुपर्छ - मास्को विश्वविद्यालय उपभोक्ता सहकारी को।
यो विश्वव्यापी प्राविधिक कलेजहरु सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। विश्वविद्यालयहरु धेरै मानवीय र आर्थिक क्षेत्रमा (विभाग) छन्, तर मुख्य जोड प्रौद्योगिकी, संरक्षित छ। हामी इच्छा नजर मा दर्जा को राज्य विश्वविद्यालय मास्को।
रूपमा तपाईंले पहिले नै देखेको देखि माथि, मा क्षण यो धेरै लोकप्रिय किसान (विशेष गरी आनुवंशिक प्रजनकों), टेक्नीसियन र technologists। आखिर, यो देश को विकास को स्तर यसलाई उद्योग र निर्माण मा सामान्य विकास कसरी निर्भर कुनै गोप्य छ। तिनीहरूले आफ्नो आफ्नै हुँदा पक्कै पनि राम्रो - यो कुशल कर्मियों आवश्यक छ।
मास्को को कृषि विश्वविद्यालय तिनीहरूलाई (100 को बाहिर र्याङ्किङ्ग 31)। Timiryazev, रूस मा विश्वविद्यालय को सूची मा आफ्नो स्थिति भए तापनि विशेषज्ञहरु प्रजनकों को प्रशिक्षण को क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो रूपमा मान्यता गरिएको छ।
MATI। Tsiolkovsky, साथै मास्को उड्डयन संस्थान, उड्डयन र एस्ट्रोनटिक्स एक अनुसन्धान इन्जिनियर जारी। यो प्रवृत्ति सधैं एक प्रतिष्ठित छ (अझै संघ मा) आज यस्तो शिक्षा तिर सकारात्मक मनोवृत्ति कायम राख्न। यसबाहेक, 2016 र 2017 को राज्य को बजेट मा लागि उड्डयन उद्योग विकास लागि कोष, त्यसैले बजेट स्थानहरूको संख्या समावेश र प्रतियोगिता देश भर उड्डयन विश्वविद्यालयहरु मा 15-25% वृद्धि भएको छ।
विश्वविद्यालय को एक बुद्धिमानी विकल्प कसरी बनाउन
यदि विद्यालय दिन तपाईं जस्तै दुरुस्त अनुशासन र संगठन सबै प्राविधिक माध्यम, सुरूवात एक बाइक र अन्त्य आफ्नो मोबाइल फोन, त्यसपछि तपाईं गर्न विश्वविद्यालय।
तपाईं पहिले नै परिचित छन् मास्को विश्वविद्यालय राज्य (सूची दर्जा, संकाय), त्यसैले तपाईंलाई थप विवरण आवेदकहरुलाई लागि आवश्यकताहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईं राम्रो विद्यार्थी थिए भने, कुनै पनि शारीरिक र गणितीय लिसेयुम बाहेक, त तपाईं ठूलो काम नगर्नुहोस्। तपाईं एउटा सरल स्कूल पछि हो भने, तपाईंले परीक्षा परिणाम आफ्नो हात प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक विश्वविद्यालय, विशेष गरी राज्य, प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको बजेट गर्न भर्ना लागि धेरै संभावना दिन्छ। तसर्थ, सबैलाई उच्च प्राप्त गर्ने मौका छ शिक्षा निःशुल्क र तुरुन्तै प्रतिष्ठित जब फेला पछि।
यदि चयन निर्देशन "तपाईं को लागि छैन"
किनभने व्यक्तिगत underachievement (पूर्ण बिभिन्न परिस्थितिहरू) को केही विद्यार्थी कटौती गरिएको छ। यो अपरिहार्य छ, र यो तपाईं विश्वविद्यालय गर्न पहिलो पटक वा तुरुन्तै स्नातक पछि जाने सकेन भन्ने तथ्यलाई जस्तै डराउनु हुँदैन। सायद तपाईं बस एक विशेष क्षेत्रमा पर्याप्त ज्ञान छैन, र सामाग्री सिक्न तपाईं पनि एक वर्ष छ। तपाईं प्राप्त एक इच्छित बोट कर्मचारी र सजिलो हेर्नुहोस् उत्पादन देखि भित्र। यो स्कूल र अनुशासन मा पहिले नै सिकेका संगठित रूपमा प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
सबै विषयहरू सिकाउने पहिलो केही वर्ष समयमा तिनीहरूले ज्यादातर सामान्य शिक्षा, त्यसैले संकाय र अन्य शैक्षिक संस्था मा संकाय गर्न स्थानान्तरणका मात्र केही वस्तुहरूको फरक खर्च हुनेछ को संभावना हो। के तपाईं आफ्नो दिशा चयन गरेनन् भन्ने महसुस भने, त्यसपछि यसलाई परिवर्तन दृढ इच्छा संग कठिन हुने छैन। यो गर्न, हामी आवश्यक मास्को, सूची र आफ्नो रुचि तपाईंलाई मदत गर्नेछ भन्ने दर्जा को विश्वविद्यालयहरु मात्र जाँच्न।
आफ्नो सबै प्रयासहरूलाई राम्रो भाग्य र सफलता!
कसरी कलेज गर्न बजेट को आधार मा 9th ग्रेड पछि जाने?
पेन्जा राज्य प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय: विश्वविद्यालय को मर्यादा, पारित स्कोर र समीक्षा
AM-PM-समय कसरी खडा?
महिनावारी समयमा रगत थक्के - आफ्नो शिक्षा योगदान कि कारण।
तपाईं गार्निअर टेनिंग लागि तेल प्रयास गरेका छन्? गहन घामले डढाउने काम को लागि कुनै राम्रो अर्थ!
लरेन Oliver: जीवनी र बिब्लियोग्राफी
बीजिंग मा ब्लैक लेग - अधिकांश हेड बीच
शिक्षा आधुनिक अवधारणा र व्यक्तित्व को गठन यसको भूमिका
ओल्गा Vasilevna Gobozova। जीवनी टिभी तारा